यौ*न सम्पर्क : अविवाहित भन्दा बिबाहितमा सन्तुष्टि, यस्ता छन कारण::देश र जनताप्रति समर्पित
आजकल यस्ता कयौं उदाहारणहरु सुन्न र देख्न पाइन्छ । जहाँ धेरै युवा विवाहित महिलातर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । हालसालै भएको एक अनुसन्धानका अनुसार यो तथ्यलाई पनि पुष्टि गरेको छ ।
शोधमा यसको पछिको कारण पनि बताइएको छ आखिर पुरुलाई विवाह गरेको महिला अन्य युवतीको तुलनामा किन आकर्षक लाग्छ ? युवाले विवाहित महिलालाई किन डेट गर्ने इच्छा राख्छन् ? त्यसका केही कारण यहाँ उल्लखे गरिएको छ ।
विवाहित महिला तर्फ अविवाहित पुरुष आकर्षित हुनाको अर्को पक्ष शारीरिक सम्पर्क रहेको छ । सम्बन्ध बारेको प्रस्तावका लागि अविवाहित भन्दा विवाहित सहज हुने युवाहरको अनुमान र अपेक्षा हुन्छ ।